विप्लवको पार्टीमा प्रकाण्डको अलग्गै गुट | NepalDut
विप्लवको पार्टीमा प्रकाण्डको अलग्गै गुट
नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा दुईलाइन अन्तरसंघर्ष चर्किएको छ । सशस्त्र क्रान्तिको दिर्घकालीन रणनीतिसहित अगाडि बढेको नेकपामा महासचिव विप्लव र अर्का नेता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’बीच दुईलाइन संघर्ष सुरु भएको हो ।
तत्कालीन माओवादीभित्र पनि पार्टी विभाजन नहुँदै प्रचण्ड, मोहन वैद्य र डा.बाबुराम भट्टराईबीच पार्टीको कार्यदिशा र राजनीतिक दस्तावेजबारे संघर्ष चल्दै आएको थियो । त्यही अन्तरसंघर्ष पेचिलो बन्दै जाँदा माओवादी विभाजन हुन पुगेको थियो । सुरुमा ठूलो समूहको नेतृत्व गर्दै मोहन वैद्यको नेतृत्वमा पार्टी विभाजन भयो भने मोहन वैद्यबाटै विप्लव फुटेर गए ।
त्यसपछि प्रचण्डसँगै रहेका डा. बाबुराम भट्टराईले माओवादी परित्याग गरेको घोषणा गर्दै नयाँ शक्ति नेपाल गठन गरेका छन् भने प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी नेकपा एमालेसँग पार्टी एकता गर्दै नेकपामा रुपान्तरण भइसकेको छ ।
तर, विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा पनि दुई शीर्ष नेताबीच देखिएको विवाद हेर्दा सामान्य तर भित्री रुपमा भूसको आगोजस्तै सल्कँदै गएको छ । नेकपाका एकजना नेताका अनुसार विप्लव र प्रकाण्डबीच एकअर्कालाई सिध्याउने र अस्तित्व नै स्वीकार नगर्नेसम्मको अवस्था पार्टीभित्र सिर्जना भएको छ । पछिल्लो समय नेपालको आन्तरिक सुरक्षामा सबैभन्दा चुनौती बन्दै गएको विप्लव नेतृत्वको पार्टीभित्र विवाद किन उत्पन्न भयो त ?
विप्लव र प्रकाण्डका दुई गुट
पार्टीको नेतृत्व गरेका विप्लव अहिले भूमिगत छन् । विप्लव भूमिगत हुँदा खुला मोर्चाको कमाण्ड प्रकाण्डले सम्हाल्दै आएका छन् । पार्टीमा विप्लवपछि दोस्रो नेता पनि प्रकाण्ड नै हुन् । तर, पछिल्लो समय प्रकाण्ड पनि अर्धभूमिगत भएका छन् । एक नेताले भने, ‘‘उहाँ (प्रकाण्ड)का नाममा वारेन्टहरु जारी हुन नरोकिएपछि अर्धभूमिगत हुनुभएको छ ।’’ विप्लव र प्रकाण्डको सेरोफेरोमा घुमेको पार्टीमा पार्टीको तत्कालीन लाइन, आर्थिक अनियमितता, जनवर्गीय संगठनमा आफ्ना मान्छेहरु राख्नेलगायत विषयबाट विवाद सुरु भएको हो ।
विप्लव पक्षीय नेताहरु अहिले नै सशस्त्र संघर्षमा उत्रिने विषयमा बोलिरहँदा प्रकाण्ड भने वार्ता र विद्रोहको नीति लिनुपर्ने अडानमा रहँदै आएका थिए । त्यही विषय नेकपाभित्र पेचिलो बन्दै गएको हो । पार्टीको कार्यदिशा र व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाका आधारमा पार्टीमा दुई गुट स्पष्ट रुपमा देखिएका छन् । पार्टी नेताहरु दुई गुटमा विभाजन हुँदा सबैजसो जनवर्गीय संगठनमा विवाद हुन थालेको छ । कतिपय संगठनमा विप्लवको दबदबबा छ भने केहीमा प्रकाण्डको । जनवर्गीय संगठनको विवाद पत्रकारहरूको संगठनबाट सुरु भएको थियो ।